June 2020 – Page 22 – Focus Myanmar
အရက်ပြန် ကို အသုံးချနိုင်သော အံ့သြဖွယ်ရာနည်းလမ်းများ
အရက်ပြန် က အိမ်တိုင်းရဲ႕ ေဆးသေတ္တာထဲမွာ ထားထားသင့်တဲ့ ပစ္စည်းပါ။ သူက ပိုးသတ်တာ၊ ေျခႇးေပါက်ကျဉ်းတာ၊ လင်နမင်လိုၿမိဳး အသုံးဝင်တာ၊ ပစ္စည်း မၾက်ႏွာပြင်ေပါ်က ပိုးတွေကို သေစေတာတွေအတွက် ထိထိေရာက်ေရာက်
ပရစ်ကြော် လုံးဝ မစားဖြစ်တော့တဲ့ နောက်ကွယ် ကရက်စက်ဖွယ် အမှန်တရားတစ်ခုကို ပြောပြလာတဲ့ ဦးဇင်းတစ်ပါး
Categories တရားအဆံုးအမ်ား/ဗဟုသုတ	Comments: 0
လက်ဖဝါးမှာရှိနေတဲ့ နှလုံးသားလမ်းကြောင်းက ပြောနေတဲ့သင့်ရဲ့ အနာဂါတ်အချစ်ရေး
Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် ကြက်သွန်ဖြူစားပေးခြင်းအားဖြင့် သွေးတိုးတာ၊ နှလုံးရောဂါ၊ ကိုလက်စထရော နဲ့ သွေးကြောကျဉ်းတာ ၊ နှလုံးရောဂါတွေကြောင့် သွေးစီးဆင်းမှု လျှော့နည်းတာတွေအတွက် ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ကြက်သွန်ဖြူဟာ အကျိုးကျေးဇူးအများဆုံး အစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်ပေမယ့်လည်း ကျန်းမာရေးနဲ့ အညီညွှတ်ဆုံး အစားအစာဖြစ်တယ်လို့တော့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ ကြက်သွန်ဖြူကို စားရင်ဘယ်သူမဆို ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာမဆို စားသုံးလို့ရသလားဆိုတော့ အခုဖော်ပြမဲ့ အခြေအနေ မျိုးဆိုရင်တော့ မစားသင့်ပါဘူး။ ကြက်သွန်ဖြူကို လုံးဝစားလို့မရဘူးလားဆိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဆေးဖြစ်ဝါးဖြစ် မီးဖုတ်ပြီး စားတာတို့ အစိမ်းလိုက် ဝါးစားတာတို့ကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။ ဟင်းချက်တဲ့နေရာမှာတော့ ထည့်ချက်လို့ရပါတယ်။ သွေးဖိအားနည်းခြင်း ကြက်သွန်ဖြူကို အစိမ်းလိုက်စားတာဟာ သွေးတိုးကျစေလို့ သွေးဖိအားနည်းတတ်သူတွေအတွက် ကြက်သွန်ဖြူကို အစိမ်းလိုက်မစားသင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါး အမျိုးမျိုး မှီဝဲနေရရင် သင်ဟာ ဝေဒနာတစ်ခုခုကြောင့် ဆေးဝါးတစ်မျိုးမျိုး မှီဝဲနေရသူဖြစ်ရင် ကြက်သွန်ဖြူကို မစားခင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူဟာ ဆေးဝါးတစ်မျိုးမျိုးရဲ့ အာနိသင်ကို မြင့်တင်နိုင်စွမ်းရှိတာပါတယ်။ ဒါဟာ...
ဖုန်းအားသွင်းတာ နဲ့ ပတ်သက်လို့ လူတိုင်း လုပ်တတ်ကြ တဲ့ အမှား အယွင်းများ
ဖုန်းအားသွင်းတာနဲ့ပတ်သက်လို့ လူတိုင်းလိုလိုလုပ်တတ်ကြတဲ့ အမှားအယွင်းလေးတွေ
ဝမ်းဗိုက်ခေါက်မှာ အဆီစုပြီး ဝမ်းမမှန်သူများအတွက်
Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် ဝမ်းဗိုက်ခေါက်ထူ၍ အဆီစုနေသူများနှင့် ဝမ်းမမှန်သူများသည် ဂျင်း သံပုရာပျားရည်ဖျော်ကို ညစဉ်မှန်မှန် သောက်သုံးပေးမည်ဆိုလျှင် အဆီများချေဖျက်ပေး၍ ဝမ်းချူပ်ခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်….. ဖျော်ရည်ပါဝင်ပစ္စည်းများ သံပုရာသီးတလုံး ဂျင်းအနည်းငယ် ပျားရည်ထမင်းစားဇွန်းတဇွန်း ဆူပွက်နေတဲ့ ရေနွေး တို့ကိုလိုအပ်ပါတယ်. … သံပုရာသီးနှင့် ဂျင်းကို ရေဆေး၍ ပါးပါးလှီးပြီး ခွက်ထဲသို့ထည့်ပါ ပျားရည်တဇွန်းထည့်၍ ဆူပွက်နေတဲ့ ရေနွေးကို လောင်းထည့်ပေး၍ အဖုံးအုပ်ပြီး အအေးခံထားပါ… ညအိပ်ရာဝင်ချိန်တွင် အစာနဲ့ကင်းအောင်နေပြီးမှ ဖျော်ရည်သောက်ပါ (ညအချိန်တွင် အစာနဲ့ဝေးဝေး သောက်ရန်) တပါတ်အတွင်း သိသာပါတယ် #မှတ်ချက် အစာအိမ်ရှိသူများ မသောက်သုံးပါနဲ့။ တလပြည့်အောင်သောက်ပြီးမှ ခဏနားပြီး ပြန်သောက်ပေးပါ… အရမ်းဝနေသူများတော့ ဇွဲရှိဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်…. share from: nalonetardiary Zawgyi ျဖင့္ဖတ္ရန္ ဝမ္းဗိုက္ေခါက္မွာ အဆီစုၿပီး ဝမ္းမမွန္သူမ်ားအတြက္ ဝမ္းဗိုက္ေခါက္ထူ၍ အဆီစုေနသူမ်ားႏွင့္ ဝမ္းမမွန္သူမ်ားသည္ ဂ်င္း...
Categories အလွအပ	Comments: 0
Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် ဗေဒင်မိတ်ဆွေတွေ အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်နဲ့ နေလိုတယ်လို့ လာလာပြောကြတာရှိတယ် အဲဒီလိုလာပြောရင်တော့ အောက်ကယတြာတွေကို လုပ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဆေးရုံ၊ စာသင်ကျောင်းများဆောက်တဲ့ အခါမှာ တတ်နိုင်သလောက်လှူပေးပါ။ဘိုးဘွားရိပ်သာတွေမှာ မိမိတတ်နိုင်သလောက်လှူပေးပါ။ လမ်းဘေးရေအိုးစင် သို့မဟုတ် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ သောက်ရေအိုးလှူပေးပါ အထူးယတြာအနေဖြင့် အောက်ဖေါ်ပြပါ အတိုင်းလည်းလုပ် ကိုယ်တိုင်လည်း လုံ့လစိုက်ငွေရှာပေါ့ဗျာ။ ပထမ နည်းလမ်း အုန်းသီးခွံနှင့် စာကလေးအိမ် ဆောက်လုပ်ရမယ် အပြင်ကတော့ အုန်းဆံကြိုးနှင့် ချဉ်ပြီး အိမ် တံစက်မြိတ်မှာ တွဲလောင်း ချည်ထားဗျာ။ နေ့တိုင်းတော့ အဲဒီငှက်အိမ်လေးတွေမှာ နေကြတဲ့ ငှက်ကလေးတွေကို အစာကျွေး ကျွေးရင်းနဲ့ ကျွန်ုပ် သည်လည်း အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်နှင့် အမြန်နေနိုင်ရပါစေလို့ ဆုတောင်းပေတော့ ဒါ နံပါတ်(၁) ယတြာပဲ။ ဒုတိယ နည်းလမ်း ညောင်ပင်ကြီးကြီး တစ်ပင်ကို ရှာ၊အဲဒီ ညောင်ပင် မှာသွားပြီး သန့်ရှင်းရေးတွေ...
Categories ဗဟုသုတ/ေဗဒင္	Comments: 0
အိမ်ထောင်ပြုဖို့ တွန့်ဆုတ်နေရတဲ့ အကြောင်းအရင်း ကို ပြောပြ လာတဲ့ အေးမြတ်သူ
အေးမြတ်သူကတော့ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူမရဲ့ သဘောထားကို အခုလို ပြောပြလာပါတယ်။
တိတ်တိတ်လေး နောက်ကျော ကို ဓားနဲ့ ထိုးပြီး ကြောက်စရာကောင်း တဲ့ အတိုက်အခိုက်တွေ ကြုံခဲ့ရဖူးတဲ့ အကြောင်း ပြောပြခဲ့တဲ့ ချောရတနာ
ေျခာင်းဆိုး တယ်ဆိုတာ ရာသီမေရွး၊ လူၿမိဳးမေရွး ဖြဈတတ်တဲ့ ေရာဂါလက္ခဏာတဈခုပါ။ စိုးရိမ်စရာေတာ့ မဟုတ်ပေမဲ့ ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့သူအတွက် ဒီေျခာင်းဆိုးနေရတဲ့ ဒုက္ခက မေသးလွပါဘူး။